यो उमेरमा महिलाले गर्छन् सबैभन्दा धेरै यस्ता अपत्यारिला हर्कत !:: पुरा हेर्नुस तपाई दंग पर्नुहुनेछ पुरा हेर्नुस
एजेन्सी । उमेरका साथ–साथ महिला तथा पुरुष महिलाको स्वभाव परिवर्तन हुन्छ । उनीहरुको रुचीमा समेत परिवर्तन हुन्छ । यस्तोमा तपाईलाई जानकारी छ ? २६ वर्ष उमेरकी महिलाले कुन काम गर्न बढी मन पराउँछिन् । खास गरेर जब उनको शारीरिक सुखसँग जोडिएको विषय हुन्छ तब उनको रुची कस्तो हुनेछ ? एटलान्टाको एक यौन खेलौना बनाउने कम्पनी लभहनीले गरेको सर्भे अनुसार महिला आफ्नो जीवनमा सवैभन्दा धेरै यौन आनन्द २६ वर्षको उमेरमा लिने गरेका छन् । अर्थात पूरै जीवनकालमा यौनको सवैभन्दा उत्तम क्षण् युवतीहरुले २६ वर्षको उमेरमा लिने गर्छन् । जबकी पुरुष ३२ वर्षको उमेरमा यौनमा सवैभन्दा आनन्द लिन्छन् ।
१ हजार मानिसमा गरिएको यो सर्वेमा १८ देखि ६५ वर्षसम्मका मानिस सहभागी भएका थिए । सर्वेमा सहभागी मानिसले दिएको जानकारीको आधारमा यस्तो नतिजा सार्वजनिक भएको हो । अनुसन्धानमा पुरुषले १७ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक यौनसम्पर्क गर्दा महिलाले १६ वर्षमा कुमारित्व गुमाएका थिए । पहिलो पटकको यौन सम्पर्कपछि पुरुषलाई १५ वर्ष ‘बेस्ट सेक्स’ का लागि कुर्न परेको थियो भने महिलालाई १० वर्षमा ‘बेस्ट सेक्स’ मिलेको थियो ।
#OMG……….. मनिषा कोइराला प्रति काजोलले गरिन् यति ठूलो खुलासा (भिडीयो सहित)
एजेन्सी , बलिउड अभिनेत्री काजोलले एउटा ठूलो खुलासा गरेकी छन् । सन् १९९८ मा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘दिल से’मा मनिषा कोइराला नभई आफु पहिलो रोजाई भएको उनले खुलासा गरेकी हुन् ।
बलिउडमा शाहरुख खान र काजोललाई सदाबाहार जोडीको रुपमा लिने गरिन्छ । यस्तै चलचित्र ‘दिल से’मा पनि यी दुई लाई नै पहिले अफर गरिएको थियो । चर्चित टिभी शो ‘आप कि अदालत’मा काजोलले भनिन् ,’निर्देशक मणि रतमले ‘दिल से’ मा शाहरुख र मलाई खेलाउन चाहेका थिए, तर म अरु नै फिल्मको शुटिङ्गमा ब्यस्त थिएँ’ । काजोलको शेड्युल नमिलेपछि यो रोल मनिषा कोइरालालाई अफर गरिएको हो ।
चलचित्र ‘दिल से’ बक्स अफिसमा औसत रह्यो भने यो फिल्मको कथा र यसका पात्रहरुको चर्चा भने आज पनि उत्तिकै रहेको छ । ‘छैयाँ छैयाँ’ ,‘ए अजनवी’ ,‘दिल से रे’ जस्ता सदाबहार गीत रहेको यस फिल्मको साउण्डट्रयाक आज पनि दर्शकमाझ लोकप्रिय छन् ।
काजोल र मनिषा कोइराला सन् १९९७ मा आएको ब्लकबस्टर चलचित्र ‘गुप्त’ मा एकसाथ देखिएका थिए भने पछिल्लो समय काजोल ‘हेलिकोप्टर इला’ र मनिषा ‘संजु’ मा देखिएकी थिइन् ।